Ny Fanjakan'i Eswatini dia nahazo ny Reserve Biosfir UNESCO voalohany
Home » Toerana fitsangatsanganana » Ny Fanjakan'i Eswatini dia nahazo ny Reserve Biosfir UNESCO voalohany
Ny Fanjakan'i Eswatini dia mankalaza ny fidirana voalohany ao amin'ny World Network of Biosfir Reserve UNESCO. Ny programa UNESCO's Man and the Biosphere (MAB) dia vao nanampy tranonkala vaovao 18 tany amin'ny firenena 12 ho an'ny World Network of Biosfir Reserve, ary ny Fanjakan'i Eswatini dia nanatevin-daharana ny Tambajotra MAB tamin'ity taona ity miaraka amin'ny soratra amin'ny toerana voalohany, ny Lubombo Biosphere Reserve.
Ny fanampim-panazavana vaovao dia nankatoavina tamin'ny fivoriana tany Paris tamin'ny 17 ka hatramin'ny 21 Jona an'ny Filan-kevitry ny Coordinating International an'ny UNESCO's Man and the Biosphere Program, izay nahatonga ny totalin'ny tahirin'ny biosferera ho 701 amin'ny firenena 124 manerantany.
Ny tahirin'ny UNESCO Biosfera dia mikasa ny hanambatra ny fiarovana ny zava-boary isan-karazany amin'ny asan'ny olombelona amin'ny alàlan'ny fampiasana maharitra ny loharanon-karena voajanahary ho ampahany amin'ny tanjona lehibe kokoa hahatakatra, hankasitraka ary hiaro ny tontolo iainana eto an-tany. Ny Man and the Biosphere Program dia programa ara-tsiansa iraisam-pirenena mikendry ny hanatsara ny fifandraisana misy eo amin'ny olona sy ny tontolo voajanahar'izy ireo - fandraisana andraikitra amin'ny alalàn'ny fampandrosoana maharitra.
Ny talen'ny jeneralin'ny UNESCO, Audrey Azoulay dia nilaza fa: "Ilaina maika ny fandraisana andraikitra amin'ny biodiversity, ho an'ny lova iombonantsika tontolo iainana. Taorian'ny famaritana ny olana napetraka, nasongadin'ny tatitra vao haingana momba ny sehatra iraisam-pirenena momba ny siansa momba ny biodiversité sy ny serivisy momba ny tontolo iainana (IPBES). Ny tahirin'ny biosfera UNESCO dia laboratoara misokatra ho an'ny fampandrosoana maharitra, ho an'ny vahaolana mivaingana sy maharitra, ho an'ny fanavaozana sy ny fomba fanao tsara. Nofehezin'izy ireo ny fifanarahana vaovao teo amin'ny tontolon'ny siansa sy ny tanora, ny olombelona sy ny tontolo iainana. ”
Ny Lubombo Biosphere Reserve dia miorina ao amin'ny Lubombo Mountain Range, izay mamorona ny sisin-tany atsinanan'i Eswatini miaraka amin'i Mozambika sy Afrika atsimo. Izy io dia ao amin'ny Maputoland-Phondoland-Albany Biodiversity Hotspot ary mahatratra 294,020 hektara. Ahitana ny ala, ny tany mando ary ny savannah ny tontolo ianjanany. Ny karazana flora eo an-toerana dia ahitana ny karazana Barleria vao hita ary koa Lubombo Ironwoods, Lubombo Cycads ary ny ala Jilobi. Roapolo amin'ireo karazan-biby mampinono valo amby valopolo ao amin'io faritra io, no hita ao amin'ny faritra Lubombo ihany. Ny karazana biby mampinono manan-danja ao amin'ny tahiry dia ahitana Leopard, White Rhino, Tsessebe, Roan Antelope, Cape Buffalo ary Suni. Tetikasa fiarovana sy fanaraha-maso marobe, ary koa ny fambolena, fiompiana, indostria, fizahan-tany, orinasam-barotra ary ala dia efa mandeha ao amin'ny tahiry.
Tamin'ny fotoana nanamarihana sy nankalazana an'i Eswatini noho ny ezaka fitehirizana azy, ity dia volom-borona iray hafa amin'ny firenena afrikanina mpisava lalana, satria manohy mandray fepetra hitehirizana ny tontolo voajanahary tsara tarehy sy samihafa izy, ary manome fotoana ho an'ny olom-pireneny hambinina.
Ny governemanta Canada dia manendry ny seranam-piaramanidina Muskoka
Fahefan'ny seranam-piaramanidina Israel: fiaramanidina 'maro' no very signal GPS tao amin'ny habakabaka Ben Airport Airport